WordPress: versiondị 5.2 nke ọhụrụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara WP | Site na Linux
WordPress: Ntughari ohuru 5.2 na otutu ihe banyere WP
WordPress: Njirimara, Ntinye, Nhazi na Nhazi
Na anyị gara aga post banyere WordPress (WP), Sistemụ Njikwa Ọdịnaya ma ọ bụ CMS (dabere na Free Software na Open Source), akpọrọ «WordPress: Gịnị bụ CMS? Utility na atụmatụ» Anyị na-enyocha ihe CMS bụ, ma mee ka o doo anya ihe WP dị ka nke a.
Ugbu a N'ime akwụkwọ a dị ugbu a, anyị ga-ekwu maka ụdị WP (Gutenberg) nke ugbu a na ụdị ọhụụ ewepụtara (5.2), njirimara ya na nhazi ya, (ọrụ, nhọrọ na modulu) yana usoro ndị dị mkpa maka ntinye ya na nhazi ya.
2 WordPress: Ugbu a mbipute
2.1 Kedu ihe bụ WordPress?
2.2 Gutenberg: versiondị ugbu a
2.3 Uru nke imelite WP
2.4 Ọdịdị dị adị
2.4.1 Ntughari ohuru
2.4.2 Omenala ọdịnala (WP Admin)
2.5 Ntinye na nhazi
2.6 Ndị ọzọ na WordPress
Edemede a abụghị usoro sara mbara ma miri emi na ọrụ ọ bụla, nhọrọ na modulu dị na CMS nke bụ taa WP. Mana na ntụle, a na-atụ anya ka ọ bụrụ ntuziaka dị mfe ma zuru oke ma baa uru na WP, nke ga-enyere anyị aka ịmata ma ghọta ojiji nke atụmatụ dị iche iche n'ime ya, iji jiri ma debe ngwa ọrụ a emelitere.
Ebumnuche bụ akwụkwọ a bụ obere mmalite ma ọ bụ nke akwadobere maka usoro ochie na ọdịnihu nke FromLinux Blog banyere WP, dabere na anya dị ka o kwere omume na akwụkwọ gọọmentị dị na ya. Ebe ọ bụ na WP nwere obodo mara mma nke ndị ọrụ ugbu a, n'ọtụtụ asụsụ, mana ọkachasị n'asụsụ Spanish. Kedu nke nwere nnukwu katalọgụ nke ozi na ihe ọmụma dị elu karị, yana dị na WP na Spanish.
N'ihi ya, anyị nwere olile anya na nke a bụ ndu ma ọ bụ nkuzi dị mkpụmkpụ ma ọfụma iji nyere ndị ọrụ WP niile dị ugbu a, ndị ọhụụ na ọdịnihu aka na ihe ọmụma na ojiji nke ngwaọrụ ahụ.
WordPress: Ugbu a mbipute
Kedu ihe bụ WordPress?
WP bụ sọftụwia emere iji mesie ike ịnweta, arụmọrụ, nchekwa na ịdị mfe nke iji, nke mere ka ọ bụrụ CMS kachasị ewu ewu taa. Na njedebe ikpeazụ anyị kọwara ya n'ụzọ dị nkenke dị ka ndị a:
WP bụ CMS siri ike nke na-enwere ike ibudata ma jiri., ma ọ bụkwa nnukwu na magburu onwe free na-akwụ ụgwọ saịtị na-ebipụta na mba n'elu ikpo okwu ọrụ a maara dị ka "WordPress.com" nke na-enweta mmelite nke ukwuu. O nwekwaa nwanne nwanyị ọzọ aha ya dị ka "WordPress.org" Ọ dịkwa na Spanish. O nwere nnukwu ozi na teknụzụ bara uru.
Anyị na-egosikwa na WP na-arụ ọrụ ugbu a site na teknụzụ ndị a:
Taa WP na-eji asụsụ ahụ eme ihe PHP, y MySQL dị ka njikwa data (DB) na Apache dị ka ọrụ dị ala GPL ikike. Ya mere, kwuru na ngwa ma ọ bụ SW ngwá na-ezukọ na njirimara nke Isi mmalite (CA) eji na Nbudata Software (SL).
Na nkenke, enwere ike ikwu ya nke ọma na ọ bụ CMS dị egwu maka ịmepụta weebụsaịtị na blọọgụ.Otu uru ma ọ bụ uru kasịnụ dị na ya bụ nnukwu ozi dịnụ ma emelitere ịmara ma jikwaa ya.
Na nke ahụ nwere ọmarịcha atụmatụ na usoro mmepe na-aga nke ọma na-elekọta "Global Community" nke na-etinye oge ya, ihe ọmụma na nka ya. iji mee WP ihe emelitere na nchekwa. Na mgbakwunye na ọtụtụ puku ndị na-emepụta ihe, ndị mmepe na ndị na-ede blọgụ na-ekerịta ihe ọmụma ha banyere WP site na post blog, nkuzi, nyocha, vidiyo, yana imepụta ọtụtụ puku isiokwu na plugins.
Gutenberg: versiondị ugbu a
Versiondị mbụ nke WP nke ewepụtara bụ 0.7, na May 27, 2003, ruo 5.0 Gutenberg ugbu a. Nke a na-eme ka o doo anya na WP bụ ugbu a tozuru etozu, usoro siri ike, yana obodo siri ike ma na-agbanwe mgbe niile. Evolution nke egosiputara na mwepụta nke onye ọzọ na-esote mbipute 2 (RC2) maka WordPress 5.2, nke ga-adị site na Tuesday, May 7, 2019.
.5.2dị ọhụrụ XNUMX nke WP na-ekwe nkwa inye ọbụna ngwaọrụ ndị siri ike karị iji chọpụta ma dozie nsogbu nhazi na njehie na-egbu egbu. Nke a dị mkpa maka ndị mmepe ahụ na-enyere ndị ahịa ha aka ma ọ bụ na-ejikwa saịtị, ebe ọ na-eme ka ọ dịrị ha mfe ịnweta ozi ziri ezi mgbe ha chọrọ ya.
Ọ ga-agụnye atụmatụ ọhụrụ na Nchedo Ahụike Saịtị ya na ngwaọrụ Nchedo njehie PHP., nke ga-enyekwu udo nke obi mgbe a bịara na nsogbu na plugins ma ọ bụ isiokwu na weebụsaịtị jikwaa. Ọ gụnyekwara akara ngosi ọhụụ dị na dashboard gị, yana usoro nnweta ọhụụ maka onye ọ bụla na-eji teknụzụ enyere aka, na ndị ọzọ.
Ebe ọ bụ na nsụgharị 5.0, WP na-eji nchịkọta ọhụụ ọhụụ akpọrọ "Gutenberg" nke ebumnuche iji gbanwee ụzọ e si ebipụta ọdịnaya site na WordPress, nke mere na onye ọ bụla, gụnyere ndị nwere obere nkà na ụzụ, enweghị ike ịdepụta ma wuo weebụsaịtị na blọọgụ dị mfe, na-enweghị mkpa ịzụta ma jiri isiokwu ndị ọzọ ma ọ bụ plugins.
Uru nke imelite WP
Mmelite ọhụụ ọ bụla na - ewetara ụfọdụ uru ndị a, dị ka: ndozi, mgbanwe, njikarịcha, mgbakwunye ma ọ bụ iwepu arụmọrụ ma ọ bụ njirimara. Na mkpokọta okwu, enwere ike ịgbada ha n'ime ihe ndị a:
Mmelite na ogo koodu na ojiji
Imezi-larịị ndozi na admin panel
Njikarịcha (ọsọ na ọsọ) nke koodu ahụ
Ngwọta maka njehie (chinchi) achọtara
Mgbanwe na ọkwa nchịkọta ọdịnaya
Multimedia gallery ọkwa nkwalite
Isi njikarịcha isiokwu
General nche larịị nke ngwa
Ndị a na obere uru ndị ọzọ na-eme ka ọ dị mkpa iji melite WordPress na ụdị ya kachasị ọhụrụ, ozugbo enwere ike, iji dozie ya oge niile ma dozie ya n'oge a na-agbanwe agbanwe teknụzụ.
Ugbu a WP nwere usoro njikwa ndị a na nhọrọ ya ma ọ bụ arụmọrụ ya:
Omenala ọdịnala (WP Admin)
Ihe m kwuru
Blọọgụ m na-eso
Akụkọ inggba inggwọ
Detuo otu edemede
Tinye nke ohuru
Detuo otu peeji
Nkwado oru ngo
Ndị ọrụ niile
Kpọọ ndị ọrụ
Ihe omuma m
Email tiketi mgbanwe
Emechaa na ọkwa ọzọ gbasara WP anyị ga-abanye n'ime ngalaba ndị a, modulu, nhọrọ na arụmọrụ.
Dị ka anyị kọwara na ọkwa anyị gara aga banyere WP, ugbua na FromLinux Blog enwere isiokwu ndị na-akụziri anyị otu esi etinye ma hazie WP, yabụ na anyị agaghị ekwughachi ọdịnaya ahụ mana anyị ga-enye ukara ọmụma nke WordPress na Spanish na WP nwụnye na nhazi. Na mgbakwunye na ijikọ ukara ọmụma nke Codex WordPress maka Ntinye WP Multisite. Iji mejupụta ndenye ndị a oge ochie.
Ndị ọzọ na WordPress
Enwere otutu uzo di iche na WP na ahia taa. Betterfọdụ dị mma karịa na ndị ọzọ. N'ime ha, anyị nwere ike ikwu:
Emechaa na ọkwa ọzọ na "Weebụsaịtị kacha mma iji wuo blọgụ n'ịntanetị" anyị ga-abanye n'ime ndị a na nhọrọ ndị ọzọ dịnụ.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịsị na WP bụ ezigbo CMS, Ebe ọ bụ na ọ na-enye ohere ijizi jikwaa ọdịnaya na ọdịdị nke weebụsaịtị na-enweghị isi mmemme ihe ọmụma. Nke dugara ya ijide ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'etiti ndị ụwa niile kacha eji eme ihe.
Na mgbakwunye, eziokwu ahụ bụ na akwụkwọ ikike ya bụ "GPL" na-enye anyị ohere iji ya na-enweghị mkpa ịkwụ ụgwọ ya., n'adịghị ka ọtụtụ CMS ndị ọzọ nwere nha ma ọ bụ obere ogo ma ọ bụ obere ike. Ojiji ya (na sava nke anyi) ma obu na webụ, ya na ngalaba nke aka anyi, bu ihe na - egosiputa ndi iche di iche banyere ndi ozo.
Na nnukwu ego nke Plugins, Gburugburu na mgbakwunye ndị ọzọ (site na mmemme ohuru ohuru), nke ahụ mere WP ka ọ bụrụ ngwaahịa pụrụ iche na n'ụzọ zuru oke, nke na-eto kwa ụbọchị n'ụzọ ziri ezi.
Ọhụrụ interface, ebe ọ bụ na ntọhapụ nke mbipute 5.0, nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịmepụta ma jikwaa ọdịnaya na ya. Gbakwunye obodo ya bara oke uru na nke ukwu, nke na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ịchọta ngwọta maka mmejọ anyị ma ọ bụ njehie anyị banyere WP, ma ọ bụ ndụmọdụ na isiokwu enyemaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » WordPress: Ntughari ohuru 5.2 na otutu ihe banyere WP
Teknụzụ 5G dabere na Kubernetes
Microsoft weputara Q # compiler na kwantum simulators